Corner Labo gool
Hasps caadiga ah iyo jiid
A Mudada NOOCA qaybta-YW-01002
waajib culus shelf qaybta-YW 01003
FGV dhaansha slider-YW-02002
Haining Factory Hardware YongWang waxa uu ku yaalaa wax soo saarka hardware Shiinaha saldhig-Yan'guan, bari ee Shanghai, galbeed ee Hangzhou. Waxay leedahay gaadiidka haboon. Haining ee baddu surgent sidoo kale waa dhowayd. Our warshad inta badan manufactures handarraabbadeedii kala duwan, qaban, raaga oo xagal, birihii iyo noocyada kale ee hardware. Currently, warshad uu leeyahay goynta silig, 8 gotaan, planers iyo qalabkii kale ee furitaanka caaryada, xoog farsamo badan.
DAR: Liannong Village, Yan'guan Town, Haining City, Gobolka Zhejiang